Ahoana ny fananganana mpizara tranonkala sy hampiantranoana tranonkala amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Isaac | | GNU / Linux, Tambajotra / seriver
Raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana ny sasany serivisy fampiantranoana izay misy amin'ny tamba-jotra dia afaka mampiantrano pejin-tranonkala na inona ny mpizara tranonkala ary ny fomba fiasan'izy io, ao anatin'izany ny bara miseho ao amin'ny URL an'ny pejin-tranonkala sasany, ny fomba ahafahan'ny mpanjifa mifandray amin'ny pejy web lavitra, sns. ao amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava anao tsara. Hampianatra anao aho tsy ny foto-kevitra momba ny atao hoe mpizara ihany, ho fantatrao koa ny fomba hamoronana ny mpizara tranonkala anao tsikelikely noho ny tutorial anay tsotra.
Androany isika rehetra dia mampiasa serivisy lavitra isan-karazany, ary koa ny fitomboan'ny rahona mitombo, fa raha misy serivisy misongadina ambonin'ireo ambiny, angamba izy io no omen'izy ireo mpizara tranonkala, satria misy tranokala an-taonina maro izay tsidihinay isan'andro hamaky ny vaovao ankafizinay, hanamarinana ireo mailaka avy amin'ny atiny Internet izay manome serivisy sasany toy ny GMail, manao fifanakalozana, miasa, mividy an-tserasera, sns. Tsy misy afa-mandositra an'ireny serivisy ireny, sa tsy izany? Na izany aza, ho an'ny maro amin'ireo mpampiasa azy dia mbola tsy fantany ihany hoe inona no ao ambadik'izy ireo ...
2 Inona no pejy web?
3 Ahoana no iasany?
4 Tutorial: manangana tsikelikely ny mpizara tranonkala anao
5 Ataovy ao amin'ny mpizara ny tranokalanao
Ny mpampiasa sasany dia mieritreritra an'izany mpizara dia zavatra manokana, zavatra tena tsy mitovy amin'ny tena izy. Saingy hoy amin'ny fiteny tsotra, ny mpizara iray dia tsy inona fa ny solosaina tahaka ilay azontsika atao ao an-tranontsika, fa tsy mihetsika amin'ny maha-mpanjifa azy dia manao azy ho mpizara, izany hoe manome serivisy. Mety hieritreritra ianao fa, amin'izany, ny antony tsy dia fahita firy ireo sary hitantsika amin'ny fahitalavitra na amin'ny haino aman-jery hafa ...
Eny, ireo sary toa ilay nampidiriko teto dia sarin'i toeram-piompiana mpizara. Io no anarana nomena andiana cluster komputer izay miasa miaraka amin'ny mpizara tokana. Ataovy ao an-tsaina fa ny serivisy omen'ireo mpizara ireo matetika dia natao ho an'ny mpampiasa an-jatony, an'arivony na an-tapitrisany maro izay miasa ho mpanjifa amin'ny solo-sain'izy ireo, finday avo lenta, takelaka, fahitalavitra marani-tsaina sns. Noho izany, ny fahaiza-manao izay tsy maintsy tantanin'izy ireo dia ambony lavitra noho ny an'ny solosaina an-trano.
Mila mieritreritra fotsiny momba ny serivisy toa ny Twitter ianao, mpampiasa marobe an-tapitrisany an'ity tambajotra sosialy ity, firy ireo rakitra sy hafatra nafindra isaky ny segondra. Raha mandinika ianao dia a tahirin-kevitra be dia beNoho izany dia tsy mitombina amin'ny fifandraisana toa ilay ananantsika ao an-trano sy solosaina mahazatra. Ilaina ny fifandraisana haingana dia haingana mba tsy hisy fahatarana amin'ny fidiran'ireo mpampiasa rehetra ireo, ary omeo azy ny fahaiza-manao ilaina hahafahan'izy ireo mampiantrano izany vaovao rehetra izany.
Miaraka amin'ity no tiako holazaina dia ny ity serivisy ity "Solosaina" ampolony na an-jatony no ampiasaina toy ireo azontsika ampiasaina ao an-trano izay apetraka ao anaty lalimoara misy fatotra. Fa raha ny tena izy, ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy lavitra ny solosaina birao toa ilay ao an-tranontsika. Angamba ny sasany manana microprocessors manokana toa ny AMD EPYC, Intel Xeon, sns., Angamba koa manana kapila mafy maromaro namboarina ho RAID izy ireo mba hialana amin'izany raha misy tsy mahomby amin'izy ireo dia very ny fampahalalana, fa araky ny nolazaiko dia tazomy fa solosaina tahaka izy ireo ireo izay tantaninao dieny izao, ary holazaiko anao izany satria izao dia hazavaiko aminao ny fomba hamadihana ny PC ho serivera maotina ...
Mazava ho azy ireo maro karazana ny mpizara, misy ireo izay manome serivisy rahona, toy ny fitehirizana, misy ireo izay manome serivisy mailaka, mpizara tranonkala, ary misy koa ny serivisy tsotra toy ny DNS, NTP, DHCP, LDAP, sns., izany hoe, ireto farany rehetra dia tena ilaina ary azo antoka fa mampiasa azy ireo isan'andro ianao nefa tsy tsapanao akory, satria serivisy omen'ny ISP (Mpanome Tolotra Aterineto) sasany na mpanome tolotra Internet anay izy ireo.
Inona no pejy web?
Ary raha azo atao izany dia manana mpizara tranonkala mampiantrano azy ireo izahay, izany hoe mitahiry ireo angon-drakitra rehetra ireo amin'ny kapila mangirana, ary koa andianà protokolan'ny tambajotra toy ny HTTP (HyperText Transfer Protocol) ary HTTPS (HTTP miaraka amin'ny fiarovana SSL / TLS). Ny rindranasa iray dia hikarakara an'io satria hampianarinay anao any aoriana, izany hoe ny fampiharana fifandraisana roa sosona ho an'ny mpanjifa ary afaka mamakivaky ny atiny hypertext izy, izany hoe ny fomba hizarana, hampifandraisana ary hifandraisana amin'ireo fampahalalana namboarina mankany amin'ny WWW (World Wide Web).
Eny, efa fantatsika ny atao hoe tranonkala sy mpizara tranonkala iray, nohazavaina tamin'ny fombako ary amin'ny fiteny tsotra mba hahafahan'ny olona bebe kokoa mahatakatra azy, eny fa na dia ireo izay tsy manana fahalalana momba an'ity haitao ity aza. Ary izao dia manohy ity fizarana ity izay hiezahako hazava tsara ny fiasan'ity rafitry ny server-client ity. Fa noho izany, hanavaka ny roa aho aloha:
mpanjifa: ny mpanjifa dia ilay mpampiasa miditra amin'ny tranokala amin'ny fitaovany, na solosaina finday, birao, tablety, smartphone, sns. Raha te hiditra dia mila fifandraisana Internet sy tranonkala fotsiny ianao, lozisialy tena manan-danja eo amin'ny lafiny client izay tompon'andraikitra amin'ny fampisehoana ireo atiny web rehetra amin'ny fomba mahamety ny mpampiasa ary mamela ny mpampiasa hifandray aminy. Ary noho izany dia tsy mila ny adiresin'ny pejin-tranonkala na IP fotsiny izahay ..., na dia mety mieritreritra aza ianao fa tsy ilaina foana izany hidirana izany, satria misy motera fikarohana (oh: Google) izay mamela amin'ny alàlan'ny teny lakile izahay hampiseho ireo tranonkala ireo izay efa nanondro, ary marina ny anao.
Server: Araka ny efa nohazavainay, dia hisy ny angon-drakitra rehetra sy rindrambaiko miasa toy ny mpizara, izany hoe mamela ny mpanjifa hifandray hanao izay ilain'izy ireo atao. Raha misy mpizara tranonkala dia ho, ohatra, Apache, Lighttpd, sns.
Te-hanondro zavatra hafa aho, ary izany dia araka ny fantatrareo ihany, ny adiresy IP Izy io no mamaritra ny masinina mifandray amin'ny tamba-jotra, amin'ity tranga ity dia ny IP an'ny mpizara tranonkala. Misy ny sasany serivisy toa izao izay mampiseho aminao ny IP an'ny pejy tianao indrindra, ohatra, raha mikaroka ao amin'ny google.es dia hasehony anao ny IP mifanentana amin'ny mpizara fampiantranoana ity serivisy ity. Raha manandrana mampiditra an'ity isa ity ianao ao amin'ny bara adiresin'ny tranokalanao, dia ho hitanao fa amin'ny alàlan'ny fametrahana www.google.es sy ny hoe IP, amin'ireo tranga roa ireo dia haseho an'i Google izany.
Fa maninona no nolazaiko izany? Eny satria manampy ahy hifandray izany DNS server. Ireo serivera ireo dia serivisy hafa izay misy latabatra misy ny anaran'ireo tranonkala sy ny IP mifandraika amin'izany, ka rehefa misy olona mitady adiresy amin'ny anarany fa tsy mampiasa IP, dia asehon'ny mpizara ilay atin'ny tranokala. Izany dia natao mba hahatonga azy io ho intuitive kokoa ho an'ny olombelona. Tsy tadidintsika mora foana ireo isa rehetra ireo, fa afaka mahatadidy ny anaran'ny tranonkala ankafizinay isika, marina?
Ary mifarana amin'ny famaritako hoe inona ilay URL (Mpanome loharanom-pahalalana mitovy) na mpitady loharano fanamiana, izay hitantsika eo an-tampon'ny baran'ny browser raha miditra amin'ny tranokala iray isika. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe misoratra anarana amin'ny myweb.es domain ianao. Amin'ity tranga ity dia ho anao ilay sehatra ary azonao ampiasaina hampiasaina hanehoana ny pejin-tranonkalanao. Alao an-tsaina hoe misy mahazo ny adiresy http://www.miweb.es/info/inicio.html#web:
http://: Manondro fa miditra amin'ny alàlan'ny protokol HTTP isika, na mety HTTPS, FTP, sns aza. Saingy amin'ity tranga ity dia io no voalohany, noho izany dia atiny web.
WWW: fantatrao fa avy amin'ny World Wide Web izy io.
miweb.es: ity no sehatra nosoratanao, izany hoe ilay anarana manolo ny IP an'ny mpizara na mpampiantrano izay misy ny tranonkalanao. Noho izany, dia ho anarana iray izay manondro mpizara na masinina, rahateo ... Ankoatr'izay dia misy TLD (Top Level Domain) izay amin'ity tranga ity dia .es, hamantarana fa tranonkala iray avy any Espana izy io, na dia mety ho .se avy any Suède, .com avy amin'ny orinasa, .org Organisation, sns.
/info/inicio.html#web: mamaritra fotsiny ity fa niditra an-tserasera ity atiny ity, izany hoe lahatahiry fampahalalana ary ao anatiny dia rakitra home.html miaraka amin'ny hypertext ary manokana ilay faritra Malagasy. Mety ho sary, PDF, horonan-tsary sns. Toy ny mitranga ao amin'ny mpitantana ny rakitrao rehefa mandeha amin'ny làlan'ny kapila mafy misy anao ianao, sa tsy izany?
Heveriko fa miaraka amin'ity dia ampy fandidiana mazava nanazava tamin'ny fomba tsotra.
Tutorial: manangana tsikelikely ny mpizara tranonkala anao
Raha manana iray ianao Fizarana GNU / Linux, tokony ho fantatrao fa raha efa nalaminao tsara ny tambajotrao, satria tsy afaka manana IP mavitrika ianao, dia tsy maintsy mijanona izy raha tsy izany dia hanova ny sandany ary ho sarotra kokoa ny miditra amin'ny tranonkala. Ho fanampin'izany, tokony hojerenao ihany koa raha manana rindrambaiko namboarina miaraka amin'ny iptables na rindrambaiko hafa ianao izay tsy misy fitsipika mametra ny famindrana amin'ny alàlan'ny port 80 na 8080, sns., Toy ny hoe manana AppArmor na SELinux ianao dia tokony avelan'ny mpampiasa hamela Daemon mpizara tranonkala, amin'ity tranga ity Apache.
Ny dingana manaraka dia ny fametrahana ny rindrambaiko hampihatra ny mpizara tranonkala eto amintsika, amin'ity tranga ity Apache sy fonosana fanampiny hafa hamita ny LAMP, saingy mety ho hafa izany. Raha ny amiko, avy any Debian:
Azonao atao izany avy eo amboary ny masontsivana sasany avy amin'ny mpizara raha mila izany ianao, na angamba raha tsy mandeha izy ary mahazo ilay pejy asehoko anao amin'ny sary teo aloha ianao, zahao ireo hazo satria nisy zavatra tsy nety ... Raha izany no izy, hitanao io pejy amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranokalanao ary apetraho ny localhost 127.0.0.1 .2 ao amin'ny bara adiresy na ny IP static izay namboarinao ho an'ny mpizara anao. Ny seranan-tsambo misy anao dia ao amin'ny /etc/apacheXNUMX/ports.conf raha te hanova azy ireo ianao.
Raha tianao dia afaka mametraka hafa koa ianao fonosana fanampiny, raha mikasa ny hanana mpizara mailaka ianao, na tontonana fikirakirana sasany toa ny phpAdmin, sns.
Ataovy ao amin'ny mpizara ny tranokalanao
Raha vantany vao vonona ny mpizara anay, dia tadidio fa ny PC izay natokanao ho an'ny mpizara dia tokony ho eo foana ary mifandray amin'ny tambajotra mba hahafahan'ny tranonkala miditra amin'ny fitaovana hafa, raha tsy izany dia "hidina" ny mpizara. Izao ihany isika mampiantrano ny tranonkalantsika, fa afaka namorona azy io isika tamin'ny fampiasana HTML na kaody hafa, na koa nampiasa CMS toy ny WordPress izay manamora ny zavatra ho antsika ary afaka mampiantrano amin'ny toerana iray ihany ...
Ary noho izany dia hataontsika amin'ny ny / var / www / html / lahatahiry fa raha tsy hoe novainay ny fikirakira Apache, dia ho hita eo amin'izay hampiantranoana ireo tranonkala. Ohatra, azonao atao ny manao fitsapana kely amin'ny fampiasana PHP amin'ny alàlan'ny famoronana rakitra miaraka amin'ny tonian-dahatsoratra tianao indrindra miaraka amin'ny atiny:
Antsoy izany fitsapana.php ary ankehitriny, aorian'ny famerenanao ny daemon apache2, dia ho hitanao raha azo idirana amin'ny tranokala: 127.0.0.1/test.php.
Manantena aho fa nanampy anao ity fampianarana ity ary azonao tsara farafaharatsiny ny fomba fiasan'ny mpizara, ka isaky ny miditra amin'ny bilaoginao ianao hamaky vaovao dia fantatrao ny ao ambadik'io. Aza adino ny mandao ny fanehoan-kevitra, fisalasalana na sosokevitra, ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fananganana mpizara tranonkala sy hampiantranoana tranonkala amin'ny GNU / Linux
Salama Tsy mieritreritra ve ny fampiasana PHP 5 amin'ny 2018 fa tsy misy dikany firy?
Noe Taipe dia hoy izy:
Izaho dia vao manomboka raha ny momba ny mpizara.
Inona ny IP tsy maintsy ananan'ny router?
Inona no ip tsy maintsy ananan'ny PC izay miasa amin'ny maha mpizara azy
Apache inona no ip ananany?
IP am-bahoaka ve izy ireo?
Mamaly an'i Noe Taipe
jucapopo dia hoy izy:
Manaiky mafy an'i Noe Taipe
Nandany herinandro maromaro aho nitady vaovao hahafahako manangana mpizara tranonkala Linux ary amin'ny dinika rehetra dia napetrak'izy ireo «fikafika» izay tsy miasa afa-tsy amin'ny tambajotra anatiny na eo an-toerana ary heveriko fa ny hahafahanao manangana mpizara tranonkala no tanjonao. ary misy olona afaka mahita anao amin'ny fotoana rehetra amin'ny solosaina hafa ivelan'ny tamba-jotra any amin'ny tanàna hafa, firenena, ...
Nahavita nanao mpizara tranonkala mahita azy amin'ny tamba-jotra ivelany aho, izany dia raha tsy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny IP ho an'ny daholobe sy ny fanokafana ny seranana amin'ny router modem fotsiny, dia nametraka ny Bind9 aho, mba hahafahako manondro ilay sehatra noforonina tao anaty tambajotranoko anatiny ary mandeha tsara amin'ny tambajotra misy ahy izy io, saingy tsy mahita fampahalalana momba ny fanaovana izany amin'ny Internet aho ary tsy apetraky ny olona ny ip-ko fa ny sehatra noforonina toa azy ireo, google, ny firenena, izao tontolo izao, ny fitsarana anglisy ,….
Miarahaba ary manantena aho fa hahita vaovao momba izany ianao.
Mamaly an'i jucapopo
Logiteckno1 dia hoy izy:
Miezaka ihany koa aho mianatra manangana mpizara, fa ny mahaliana ahy dia ny fomba fananganana mpizara ho an'ny famokarana ary mbola tsy mahita vaovao tsara aho.
Raha mbola tsy voavaha ny olanao dia manoro anao aho hamorona kaonty ao amin'ny noip.com. Mamorona sehatra maimaim-poana ianao, mametraka ny IP ho an'ny daholobe ary manamboatra ny DDNS amin'ny modemanao. Avelako rohy ianao: https://www.youtube.com/watch?v=6ijBQhn06CA
Valio amin'i Logiteckno1
GustavoIP dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fandraisana anjarako, nametraka mpizara LEMP fotsiny aho ary noho ny bilaoginao dia efa manana hevitra momba ny fomba fampiharana ny pejy WEB-ko aho izao, ianaro izao PHP na HTML kely, izay mora kokoa amiko sy manaraka.
Valiny amin'i GustavoIP
Fabian Ariel Wolf dia hoy izy:
Raha jerena ireo teny fanokafana anao dia alao sary an-tsaina hoe hanao torolàlana tsikelikely ho an'ireo olona tsy manana traikefa toa ahy ianao… diso aho.
Valiny tamin'i Fabian Ariel Wolf
Diego ramos dia hoy izy:
Nanompo ahy tsara izy io, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Diego Ramos
Miguel Angel Silva dia hoy izy:
Tsara ratsy ity fampianarana ity ...
Valiny tamin'i Miguel Angel Silva
Ny kinova vaovao an'ny distro Tails 3.9 miaraka amin'ny fanatsarana vaovao dia azo alaina izao
Linux Mint Debian Edition 3 "Cindy" Cinnamon Edition no eto, havaozy izao